Ungayishintsha kanjani i-Apple ID ku-iPhone yakho noma i-iPad | Kuhlanganisiwe | Ngivela kwa-mac
Ungayishintsha kanjani i-Apple ID ku-iPhone yakho noma i-iPad
Ngabe ekugcineni uthathe isinqumo sokuthola i- I-akhawunti ye-iTunes USA Ukuhlola lezo zinhlelo zokusebenza okuthi, ezimweni ezinhle kakhulu, kuthathe isikhathi eside ukufika lapha? Noma ngabe unezingaphezu kweyodwa I-ID ye-Apple kepha ufuna ukuzisebenzisa ngokungafaniyo kwi-iPad yakho, iPhone noma i-iPod Touch? Namuhla ku Kufakiwe Sikutshela ukuthi ungashintsha kanjani kusuka ku-akhawunti eyodwa uye kwenye kudivayisi efanayo kalula futhi kalula.
Kusetshenziswa ama-ID e-Apple angaphezu kweyodwa ku-iPhone noma i-iPad yethu
Uma sesivele sinama-akhawunti amabili ku iTunes, ngokwesibonelo ukuze ube ne-app Ama-Apple Trailers engatholakali eSitolo eSpain, ukushintsha phakathi kokunye kufanele silandele lezi zinyathelo ezilula:
Sifinyelela isicelo App Store (o Isitolo seTunes) kudivayisi yethu.
Esikrinini main «Okufakiwe» siye phansi lapho yethu I-Apple ID.
Chofoza kuso bese, ewindini elisha le-pop-up, khetha u- "Nqamula".
Manje chofoza ku- "Xhuma", faka iziqinisekiso zenye i-Apple ID, bese WENZA! Manje usungasebenza nenye i-akhawunti.
Lapho ufuna ukubuyela kufayela lakho le- I-ID ye-Apple kufanele ulandele izinyathelo ezingenhla ukushintsha i-akhawunti yakho. Ngale ndlela ungajabulela okuqukethwe okungatholakali ku-Apple Store ezweni lakho noma umane uphequlule lapho.
Ungakhohlwa ukuthi unezeluleko eziningi namasu amaningi esigabeni sethu Izifundiswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayishintsha kanjani i-Apple ID ku-iPhone yakho noma i-iPad
I-Oculus VR ingeza ukuxhaswa kwe-OS X ku-SDK yayo yonjiniyela
Thenga i-Apple TV bese uthola ikhadi lesipho lama-25 euro